I Jerôbôama II dia mpanjakan' i Israely tamin' ny taona 782 hatramin' ny 753 tal. J.K. Nandimby an-drainy Jôasy (na Jôasa) izy ka nanjaka nandritra ny 40 taona tao Israely. Nandimby azy i Zakaria zanany. Na dia nanoro hevitra azy aza ny mpaminany Hôsea (na Ôsea) sy Amôsa (na Amôsy) dia nanohy ny fitondran-tena ratsin' ireo mpanjaka nodimbiasiny izy.
Nalain' i Jerôbôama II tamin' i Arama ireo faritanin' i Amôna sy Môaba ao atsinanan' ny ony Jordana izay nalain' i Hazaela mpanjakan' i Arama-Damasy (na Arama-Damaskosy) tany aloha tamin' ny andron' ny mpanjaka Jeho. Tanteraka noho izany ny faminanian' i Jônà (na Jônasa).
Amin' ny teny hebreo dia יָרָבְעָם‎ / Yarob‘am no anarany fa amin' ny teny grika kosa dia Ἱεροβοάμ / Hieroboam ary amin' ny teny latina dia Hieroboam. Tantaraina ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka ny fanjakany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerôbôama_II&oldid=1042124"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 14:01
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 14:01 ity pejy ity.